Samafalayaasha Hollywood | Ragga Stylish
Fasal yeesho | | nololeedka
Kuwo badan ayaa caan ku ah samafalayaal, kuwa kalena kama warqabin doorkooda ugu deeqsinimada iyo naf-hurnimada. Qaar ka mid ah tixraacyada aan ugu jecelahay Fasalka Koowaad waxay noqdeen kuwa caan ah oo isbeddel sameynaya mahadnaqa ay u muujinayaan dagaalka ay kula jiraan sinnaan la'aanta bulshada, caddaalad darrada iyo saboolnimada adduunka oo dhan. Ma ogeyd deeqsinimada dadkaas caanka ah?
Matt Damon: Aktarka ku guuleystay Oscar, qoraa shaashad iyo soo saare sidoo kale isagoo ka mid ah kuwa ugu soo jiidashada badan, wuxuu had iyo jeer adeegsan jiray xirfaddiisa iyo xaaladdiisa caannimo si uu ugu doodo sababaha bani'aadamnimada. Ka qaybqaado in ka badan 31 NGO-yo oo difaac 27 sababo oo kala duwan oo ay ku jiraan aasaaska Maaha Daawadeena si loo difaaco xasuuqii ka dhacay Darfur, iyo sidoo kale Water.org halkaas oo ay dooneyso in lagu caawiyo bulshooyinka aan helin biyo nadiif ah. Damon sidoo kale waxay soo saartay oo ay jileysay filimo si kor loogu qaado wacyiga xaaladahaas.
Leonardo Dicaprio:Jilaagan ayaa dhawaan jirsaday 40 sano wuxuuna la jiray aasaaska uu abuuray tan iyo markii uu jiray 24 si uu u ilaaliyo dhulalka duurjoogta ah ee ugu dambeeya ee ka jira meeraha. Di Caprio wuxuu doonayaa inuu abuuro xiriir wanaagsan oo u dhexeeya dadka iyo dabeecadda. Wuxuu kaqeyb qaataa in kabadan 19 NGO-yo wuxuuna tabarucey oo maareeyey lacag aad u tiro badan sababahan awgood.
Edward Norton: Jilaagan weyn ayaa ku dhowaad caan ku ah waxqabadkiisa maadaama uu yahay nin firfircoon. Isagu waa Danjiraha Wanaagsan ee Qaramada Midoobay, wuxuu u ururiyaa lacag ilaalinta bulshada Maasai waana xubin ka tirsan guddiga Iskaashatada Beesha ee Ganacsiga, oo ah urur aan faa'iido doon ahayn oo diiradda saaraya abuurista guryo la awoodi karo. Wuxuu isku keenaa 17 sababo bulsheed oo kala duwan oo ku saabsan shaqsiyan.
Hugh Jackman:Jilaaga reer Australia, soo saare, heesaa iyo qoob ka ciyaar waa mid ka mid ah samafalayaasha waaweyn ee Hollywood. Wuxuu ogyahay sida kuwa aan badnayn inay uga faa'iideystaan ​​magaciisa si ay lacag ugu ururiyaan sababo kala duwan oo ay ka mid yihiin saboolnimada, deegaanka iyo barnaamijyada microcredit ee dalalka soo koraya.
George Clooney: kan aan ugu jecelnahay ee ugu cadcad ee lumiyay cinwaanka bachelorka dahabiga ah shaki la'aan waa midka ugu badan ee ku lug leh caddaalad darrada adduunka. Rumor wuxuu leeyahay wuxuu ku deeqayaa lacago badan si qarsoodi ah isagoo canbaareynaya xadgudubyada xuquuqda aadanaha. Wuxuu xiriir dhow la leeyahay waxa sababay xadgudubyada ka dhacay Suudaan Kuwaas oo uu ugu deeqay qaybo dayax gacmeed si loola socdo aagga, qorista fikradaha iyo waraaqaha furan ee madaxda dawladaha waxaana xitaa loo xiray mudaaharaad ka dhacay safaaradda Suudaan ee Washington hortiisa.
Dave Beckham: Dhammaantood maahan jilaayaal, halyeeygan adduunka kubbadda cagta iyo astaanta qaabdhismeedka ayaa halbowle u ahaa sababaha bani'aadamnimada in ka badan 20 sano. Dadaalladeeda waxay diiradda saareen la dagaallanka AIDS-ka iyo doorarkeeda sida Safiirka UNICEF. Intaa waxaa dheer, wuxuu leeyahay aasaas wada jir ah xaaskiisa Victoria oo caawisa carruurta jiran. Xilli ciyaareedkiisii ​​xirfadeed ee ugu dambeeyay ciyaaryahanka wuxuu ugu deeqay mushaarkiisa hay'adaha samafalka.
Brad Pitt: Shaki kuma jiro inuu yahay jilaa ugu weyn meeraha. Isaga iyo xaaskiisa Angelina Jolie waxay noqdeen kuwa caanka ah ee xilligan la ogyahay. Waxay lacag ugu deeqaan in ka badan 30 sababood oo ay weheliso kaalintiisa wacyigelinta iyo ka qayb qaadashada dhibaatooyinka bani'aadamnimada sida kuwa ka jira Darfur, Pakistan iyo Haiti.
Jamie Oliver: waa mid ka mid ah dadka caanka ah ee adduunka wax ku karsada, waa qoraa iibiyayaal iyo makhaayado aad u wanaagsan, cunto kariyuhu wuxuu lahaa urur ilaa 2005 la yiraahdo Cunno Me Better. Waxay u heellan tahay hagaajinta nafaqada carruurta. Isaga iyo isaga Jamie Oliver Food Foundation, wuxuu gacan ka geystaa waxbarashada si loo helo nolol caafimaad leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Hollywood samafalayaasha
Miyaad siisaa caraf udgoon muhiimadda ay mudan yihiin?
Faa'iidooyinka saabuunta baaruudda